August 2021 - S3k Network
August 31, 2021 s3knetwork2021 0
“မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ပြည်သူတွေဘက်က အလားအလာကောင်းကြောင်း ကုလအရာရှိဟောင်းတွေ ခန့်မှန်းပြောဆို” စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ နီးကပ်လာချိန်မှာ မြန် မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ အနိုင်ရအမတ်တွေ အများစု ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အ မျိုးသားညီညွတ်ရေး […]
တနင်္ဂနွေ သားသမီး … အရမျးခဈြတတျပါတယျ။ သို့သျော နှဈယောကျပွိုငျတူ ထားခငျြတတျတယျ။ သူတို့အတှေးကတော့အခဈြဆိုတာ တဈယောကျထဲနဲ့ပွီးရမှာလား။ အခဈြဆိုတာ ပေးလို့ကုနျသှားတဲ့အရာမှ မဟုတျတာနျော ….လို့ မြားသောအားဖွငျ့ ခံယူထားတတျကွတယျ။အခွအေနပေေးရငျတဈယောကျထကျပိုရတတျယူတတျပါတယျ။သူမြားအထငျကွီးလေးစားအောငျပွောဆိုတတျကွပါတယျ။သူတို့နဲ့စကားပွောပွီးရငျသူတို့ ကိုအထငျကွီး လေးစားသှားတတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ အပွောတဈမြိုးအလုပျတဈမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။အမြိုးသားမြားဆို ဇှတျ အတငျးခဈြရေးဆိုတတျတယျ။အမြိုးသမီးမြားကတြော့ ပှငျ့လငျးတယျ၊ ခဈြသူအတှကျဘာမဆို ရငျဆိုငျခငျြတတျကွပါတယျ။ခဈြသူအတှကျ မိသားစု […]
Mytelထိပျတနျး အရာရှိတဈဦးက ပနျဆယျလိုအား တာဝါတိုငျတှကေို PDFကဖောကျခှဲမှုတှကေို တားမွဈပေးရနျ မတ်ေတာရပျခံ
ပနျဆယျလိုကတော့ …အှနျလိုငျးပျေါမှာ စဈကောငျစီတှကေိုအထိနာအောငျရေးခွငျးကနေ… လူသိမြားလာခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ …သူမရဲ့အရေးအသားတှကွေောငျ့လညျး…. တဈဖကျကမခံမရပျနိုငျဖွဈတာကွောငျ့ …လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက သူမကထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ရပါသေးတယျ။… ဒါပမေဲ့လညျးသူမရဲ့ …ကလောငျသှားထကျမွကျမှု၊မခံမရပျနိုငျအောငျ ရေးသားနိုငျပွီး အသကျကငယျရှယျပွီးထကျမွကျတဲ့မိနျးကလေးဖွဈတာကွောငျ့…. ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးနဲ့လညျး ရပျတညျနိုငျတဲ့အပွငျ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပါတယျ။… အာဏာသိမျးပွီးကာလတှမှောတော့… စဈကောငျစီ ကနအေပူတပွငျးနဲ့အလိုရှိနတေဲ့….ပ နျဆယျလိုကတော့လှတျမွောကျရာဖွဈတဲ့ …အမရေိကနျနိုငျငံကို သှားရောကျနိုငျခဲ့လို့ …လူတှရေဲ့ဝဖေနျမှုကို […]
ဖခင်ရဲ့သတ္တိသွေးတွေအပြည့်ပါလို့ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို အတူလိုက်လာပြီး တော်လှန်ရေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားကြီး
မင်းမော်ကွန်းကတော့ မြို့ပေါ်မှာကတည်းက ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုဒ်မ (၅၀၅)ကနဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ မင်းမော်ကွန်းအနေနဲ့ အာဏာရှင်တွေလက်က လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် မနည်းရှောင်တိမ်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင်တော့ မင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပါခေါ်ပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Photo […]
ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ GYM တွေ တည်ဆောက်ပြီးပြန်လည်အခြေချနေထိုင်မယ့် စိတ်ကူးကို ပြန်စဉ်စားရတော့မယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ကမ်ဘာ့အဆင့်မီ Python MMA gym ရန်ကုန်မှာတစ်ခု ကချင်ပြည်နယ်မှာတစ်ခု ဖွင့်ထားပြီနော်။အောင်လအန်ဆန်ဟာ ရန်ကုန်မှာ Python MMA ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Gym တစ်ခုကို […]
တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအကြော်အလှော်များ ချက်ပြုတ်ကာ ပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာများ တကယ်ဝမ်းသာစရာပါ..
တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအကြော်အလှော်များ ချက်ပြုတ်ကာ ပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာများ တကယ်ဝမ်းသာစရာပါ ပျေါပငျစုံ ပရိသတျကွီးရေ… အာဏာရှငျဖို့တှနျးလှနျ ထိုကျထုတျဖို့အတှကျ သူရဲကောငျးလူငယျလေးတှဟော လှတျမွောကျနယျမွမှော သှားရောကျပွီး စဈပညာသငျယူနကွေတာပါလူငယျလေးတှဟော ထူထပျတဲ့တောတောငျတှမှော ဒက်ခ မြိုးစုံခံစားရငျး အနဆေငျးရဲ အစားဆငျးရဲနဲ့ တိုငျးပွညျအတှကျ ကွိုးစားလေ့ကငျြ့နကွေတာ အားလုံးလဲအသိပါနျောတောထဲမှာ ရလေဲရှားပါး စားစရာလဲရှားပါးတဲ့အပွငျ နမေကောငျးဖွဈတဲ့အခါ […]
မိနျးကလေး တဈယောကျ ရဲ့ (အိုး) တငျ ၊ ရငျ တှကွေညျ့ပွီး အပြိုစဈ လား? မစဈလား? ဝဖေနျနကွေတဲ့ တဈခြို့ လူတှေ ဖတျဖို့
မိနျးကလေး တဈယောကျ ရဲ့ (အိုး) တငျ ၊ ရငျ တှကွေညျ့ပွီး အပြိုစဈ လား? မစဈလား? ဝဖေနျနကွေတဲ့ တဈခြို့ လူတှေ ဖတျဖို့ ယောကျြားဆိုတာ မယုတျမာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိနျးကလေးတဈယောကျ ရဲ့ တငျ ရငျ တှကွေညျ့ပွီးအပြိုစဈလား […]
အမည်မှာ T ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် အကျင့်စရိုက်လက္ခာများ
အမည်မှာ T ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် အကျင့်စရိုက်လက္ခာများ ၁ – လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်က မွေးရာပါပဲ ။ အဲဒီ အားနည်းချက် ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့ သူတွေက ရှိသေး ၂ – သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ် လွယ်တယ် ။ […]
သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားတွေထွက်နေလို့ PDFလူငယ်တွေကိုတောင်ပေါ်အထိသွားတွေ့ကာခွန်အားဖြည့် ကတိတစ်ခုပေးခဲ့ကြတဲ့ KNUရဲဘော်များ
သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားတွေထွက်နေလို့ PDFလူငယ်တွေကိုတောင်ပေါ်အထိသွားတွေ့ကာ ကတိတစ်ခုပေးခဲ့ကြတဲ့ KNUရဲဘော်များ လက်ရှိမှာတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအကုန်လုံးကို တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက နွေးထွေး စွာကြိုဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။KNU၊KNLA၊DKBA၊KNDO စတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်း PDF တွေအတွက် လိုအပ်တာတွေကို ကူညီပေးကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေက စကားပြောပွင့်လင်းရိုးသားကြပြီး စိတ်ထားဖြူစင်ကြလို့ သူတို့ဆီမှာလာရောက်ခိုလှုံကြသူ တိုင်းကို ဖေးမပေးကြကာ စစ်ပညာလည်းသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုရင် KNU […]
ခြဲဖှငျ့ခါနီးလို့ မိမိတို့လကျဖဝါးမှာ ဒီသင်ျကတေ လေးပါနလေား စဈကွညျ့ပါအုံး
ခြဲဖှငျ့ခါနီးလို့ မိမိတို့လကျဖဝါးမှာ ဒီသင်ျကတေ လေးပါနလေား စဈကွညျ့ပါအုံး သငျ ဟာ လက်ခဏာဗဒေငျကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယျ့ရဲ့အနာဂတျအကွောငျးကို သိရမယျဆိုရငျလူတိုငျးစိတျဝငျစားကွမှာပါ။ တဈခြို့ဟောခကျြတှကေ မှနျတာတှလေညျးရှိသလို ၊ အခြို့ဖွဈမလာတဲ့ကိစ်စလေးတှလေညျးရှိပါတယျ..။ ယုံကွညျသူဖွဈစေ ၊ မယုံကွညျသညျဖွဈစေ ဒီလို လကျဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့အဓိပ်ပာယျကိုတော့ သိခငျြသူမြားအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော …။ […]